Yintoni intengo yephuli yokwakha? | Hombisa
Yintoni intengo yephuli yokwakha?
UMaria vazquez | 17/09/2021 10:00 | Izitiya
Ukuphela kwehlobo lixesha elifanelekileyo lokuhlalutya indlela esinokuphucula ngayo iindawo ezingaphandle. Ukufaka iphuli, ngaphandle kwamathandabuzo, yindlela elungileyo yokongeza ixabiso kwigadi yethu okanye ithala. Kodwa, Yintoni intengo yephuli yokwakha? Ukuba ukhe wacinga ngokubeka iphuli yokusebenza, unomdla wokwazi impendulo.
Iphuli yokubhukuda eyakhelweyo lulongezo olukhulu ukunciphisa amaqondo obushushu aphezulu ehlotyeni. Ikwakumema ukuba uphumle kwaye wonwabe, ewe! Nangona kunjalo, ukwakhiwa kwayo kubandakanya uthotho lweendleko kunye nemisebenzi yolondolozo esingasoloko siyazi kwaye kubalulekile ukuba uyiqwalasele ngaphambi kokwenza izigqibo.
1 Amachibi okwakha
1.1 Izinto eziluncedo zamachibi okwakha
2 Izinto ezichaphazela ixabiso
3 Ixabiso lephuli eyakhelweyo
Amachibi okusebenzela ngalawo zenziwe esizeni, kusetyenziswa izinto zokwakha njengekhonkrithi egutyiweyo okanye ikhonkrithi eqinisiweyo. Nangona ezona zidumileyo zingcwatywa emhlabeni, inokufakwa phezulu phezulu kwayo, oko ke kuququzelela umsebenzi wokuqala ukuba nje unesiseko senqanaba.
Phakathi kwezibonelelo ezininzi zamachibi okwakha Iqaqambisa ukuxhathisa kwayo okukhulu; Phakathi kokungalunganga kwayo ngumsebenzi, omkhulu kakhulu kunoko kufunwa zezinye iintlobo zamachibi, kwaye ngenxa yoko ixabiso eliphezulu. Kuba zininzi ezinye iindlela ukonwabela iphuli ekhaya, kutheni ke, ukubheja echibini elakhelweyo?
Izinto eziluncedo zamachibi okwakha
Amachibi okwakha a amadama okudada ubomi bonke. Banokumelana okukhulu kunye nokuqina.
Bavumela a iqondo eliphezulu lolwenziwo ngokobungakanani kunye nemilo. Ezona zithandwa ngoxande, i-oval kunye ne-L-emileyo amachibi, kodwa uyilo lwechibi luyakwazi ukwenza ngokwezifiso ngokupheleleyo.
Ungangcwatywa okanye ukhuliswe.
Inye ezahlukeneyo zokwaleka ezikuvumela ukuba udlale ngokugqiba kunye nemibala.
Ungadibanisa ezininzi iimpawu ezongezelelweyo njengoko kufunwa ngumthengi.
Umahluko wexabiso wedama lokwakha kunye a ichibi elikhethiweyo umgangatho wehlile kule minyaka idlulileyo.
Izinto ezichaphazela ixabiso
Zininzi izinto ezichaphazela amaxabiso echibini lokwakha, ukusuka kubungakanani ukuya kwinkqubo yokuhlanjululwa ekhethiweyo. Ukuba nemibono encinci malunga nenye nganye, okanye ubuncinci malunga neyona nto ibaluleke kakhulu, kubalulekile. ukuze ukwazi ukuqikelela uluhlu lwamaxabiso apho uhlobo oluthile lwedama lunokuhamba.
Ilayisenisi yokwakha. Ukuqhuba umsebenzi wedama lakho uyakufuna ilayisensi yokwakha. Ukuyifumana, kuyakufuneka unikezele uyilo lokuqala okanye iprojekthi yendawo yokusebenza kunye nohlahlo-lwabiwo mali lomsebenzi kwiHolo yeDolophu kwiBhunga lesiXeko. Iindleko zelayisensi ziya kuxhomekeka kubungakanani kunye neempawu zayo kwaye ziya kwahluka phakathi kwe-1 ne-4% yebhajethi yeprojekthi.
Ubungakanani. Ubungakanani bechibi lichaphazela ngokuthe ngqo umsebenzi ofunekayo kulwakhiwo lwayo. Ubungakanani obukhulu bukwabonisa indleko eziphezulu zolondolozo kunye nokusetyenziswa kwamanzi kwixa elizayo. Umgangatho kukunika ichibi ubuncinci ubungakanani malunga ne-3 okanye i-3,5 2 m ngomntu ngamnye kwaye kuvavanywe ubunzulu obahlukeneyo ukusuka kwimitha enye.
Umhlaba. Ukuba i-substrate ithambile, kuya kuba lula kakhulu ukumba umngxunya oyimfuneko ekufakweni kwephuli kunokuba umhlaba unamatye, uphawu olunokunyusa iindleko zabasebenzi.
Ubume. Ubume obuninzi bezoqoqosho kwidama lokwakha lixande, nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba wenze amachibi eerounded, okweqanda kunye neemilo ezingaqhelekanga. Ubunzima bokuyila, ewe, kuya kubiza kakhulu.
Iphakanyisiwe okanye ingcwatyiwe. Amachibi angaphakathi ngokubanzi ayabiza kakhulu ngenxa yesidingo sokukhupha, asuse umhlaba kwaye azinzise umhlaba. Nangona kunjalo, kumhlaba othambekileyo, ukulinganisa kunye nokubeka isiseko sekhonkrithi kunokuba njalo okanye kubize kakhulu.
Izinto zokwakha. Amachibi anokuveliswa ngekhonkrithi eqinisekisiweyo evela kubume okanye kwifomwork, okanye nge-shotcrete okanye ngoxinzelelo oluphezulu olufuthwe ngomatshini. Into ebalulekileyo kukuba neprojekthi elungileyo eqinisekisa ukuqina. Iphuli yekhonkrithi eqinisiweyo ngokubanzi iyabiza kakhulu, kodwa ipuli eneshelkrete inokubiza kakhulu ukuba kufuneka iindonga ezingqindilili kakhulu.
Ukwaleka. Ipeyinti, ithayile, ithayile ... Eyokuqala, enezoqoqosho kakhulu. Eyokugqibela yeyona nto ibiza kakhulu kodwa, ikwangoyena uxhathisayo.
Inkqubo yokulungisa ingxaki. Ukulondolozwa kwamanzi ngokufanelekileyo, kubalulekile ukufakela indawo yokucoca kunye nezixhobo ezinje ngesicoci esingezantsi esinokuba sisandla okanye esizenzekelayo, sisebenze ngakumbi. Iindleko ziya kuxhomekeka kwizixhobo ezikhethiweyo, kodwa inkqubo epheleleyo yokucoceka iya kubiza imali engaphantsi kwe- € 800.
Ixabiso lephuli eyakhelweyo
Nje ukuba zonke izinto zaziwe, sinokunika njengexabiso lesikhokelo inani elingekho ngaphantsi kwe- € 8.000, kubandakanya iprojekthi, iilayisensi kunye nolwakhiwo, ukufakelwa kwephuli encinci ye-2,5 × 3,5m. Ixabiso lechibi elixande le-4 × 6 m elenziwe ngekhonkrithi yompu liza kuqala nge-14.000, ngelixa kwimeko ye-7 × 3 m ye-L emilise ikhonkrithi enobunzulu be-1,2 ukuya kwi-1,7, 15.000 m, uhlahlo-lwabiwo mali qala malunga ne- € XNUMX.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izikhala » Izitiya » Yintoni intengo yephuli yokwakha?
Hombisa indlu yakho ngeVinyls
Ukuba ujonge i-vinyl yexabiso eliphantsi ukuhombisa ikhaya lakho. Ungaphoswa yile ingqokelela inkulu.
Ezona Vinyls zibalaseleyo
Amanyathelo ama-4 kwigumbi lokuhlala langoku
Ungayitshintsha njani inkangeleko yekhitshi ngaphandle kokutshintsha
Fumana amanqaku akutshanje ngokuhlobisa nasekhaya.